FALLO:- Rajadda Ciiddamadda Somaliya ee qaadista Xayiraada Hubka – idalenews.com
Ciiddamadda Xoogga Dalka Somalia, waxay haatan ka soo kabanayaan Khasaarihii ka soo gaaray Burburkii Nidaamkii Dowladnimo ee ku habsaday Ummadda Soomaaliyeed sannadkii 1991-kii.
Milliteriga Somalia, oo iyagu mar ahaan jirey Ciiddamadda ugu tababarka fiicnaa ee Qaaradda Afrika, ayaa waxaa lagu naanaysi jirey Geesiyayaasha Afrika, waxayna magacaasi ku kasbadeen Waddanimadooda iyo Khibradooda Milliteri.
Taariikhda waxay qiraysaa inay X.D.S. guullo lama illaaban ka soo hooyeen dagaalladdii ay galeen iyo sida ay Naftooda ugu hureen Difaaca dadka iyo dalka Somalia.
Saraakiishii sarsare ee asaaska u dhigay Ciiddamadda Qaranka, ayaa waxaa laga xusi karaa Allaha U Naxariistee General Daa’uud Cabdulle Xersi oo ahaa Taliyihii ugu horreeyey ee dhidibadda u taagay Ciiddamadda XDS.
Waxaa kaloo ka mid ahaa Marxuum General Caydiid, Marxuum General Maxamed Ibraahim Liqliqato, Marxuum Kornel C/llaahi Yuusuf Axmed, General Maxamed Cali Samantar iyo Saraakiil kale, kuwaasi oo ay wehliyeen Naftood-hurayaal Geesiyiin ahaa.
Inkastoo XDS soo mareen Waayo Taariikhi ah, haddana waxay Kacdoonkii lagu riday Dowladdii Kacaanka kadib noqdeen kuwo ay Jabhadihii Hubeysnaa ee ay ka midka ahaayeenUSC. SNM, SSDF iyo SDM ku tacadiyeen.
Ciiddamaddii XDS waxay la kulmeen Dhacdooyin laga argagaxo muddadii ay Jabhadaha hubeysan wadeen Ololihii ay ku burburiyeen Dowladnimadda iyo Macaanka Qaranimadda.
Marka aad u kuurgasho sababihii ay Ciiddamadda Qalabka Sida u burbureen, waxaa la qiri karaa inay ka dhalatay Caddaalad-darradii iyo Daryeel La’aantii ee Dowladdii Kacaanka iyo iyadoo ay Saraakiil ka gadooday Ciiddamadda ay Jabhaddo Hubeysan asaaseen, iyagoo ugu dan lahaa Danno Shaqsiyadeed, mid Beeleed iyo Damacooda ku aadanaa inay Talada Waddanka maroorsadaan.
Xaalladdii ugu xumeyd ee soo dedejiyey burburkii XDS, ayaa waxaa lagu tilmaamaa Amarkii uu bixiyey Cumar Carte Qaalib oo isagu ahaa Ra’isul-wasaarihii Dowladdii Madaxweyne Cali Mahdi Maxamed.
Saraakiisha iyo xubnaha kale ee Milliterigii XDS ayaa rumeysan inuu Amarkii Cumar Carte Qaalib soo dedejiyey burburkii Qeybaha Ciiddankii Qaranka, iyadoo uu ku amray inay Ciiddamadda XDS isku dhiibaan Jabhadihii Hubeysnaa, oo iyagu Millierigii Qaranka ku sameeyey Hub-ka-dhis, isla markaana ula wareegeen Xerooyinkii Guutooyinka, Gaasaska iyo Talisyaddii Ciiddamadda XDS ku lahaayeen Magalladda Muqdisho iyo Goballadda kale.
Dagaalyahannadii Jabhadaha ee Beelaha dhisteen waxay si xun ula dhaqmeen Ciiddamaddii Qaranka, iyadoo Kumanaan ka tirsan XDS lagu khasbay inay iyagoo farro maran kaga baxaan Magaallooyinkii ay Jabhaduhu la wareegeen.
Si kastaba ha ahaatee, Ciiddamadda Qaranka oo haatan ka soo kabanayo khasaarihii nolol-xumiddii ay Shacabka Soomaaliyeed la soo wadaageen, ayaa waxaa Saraakiishooda ka muuqda Rajo Wanaagsan oo dib loogu unkayo Ciiddamaddii.
Qaar ka mid ah Taliyayaasha iyo Askarta Ciiddamadda Qaranka ayaa soo dhaweeyey Go’aanka ay Golaha Ammaanka ee QM ee ay Somalia kaga qaadeen Xayiraaddii Hubka ee lagu soo rogay sannadkii 1991-kii.
Saraakiil la hadlay Shabakadda somalidamaanta ayaa sheegay inay rajo ka qabaan inay Milliteriga Qaranka dib u soo celin doonaan Haybaddii XDS, isla markaana ay xafidi doonaan Nabadda iyo Midnimadda Somalia.